Unxibelelwano nomthengi kuyilo lwegraphic | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UPablo Gondar | | Ihlaziywe 17/04/2018 17:36 | Idizayini yeMifanekiso, Amaqhinga, Ezahlukeneyo
La unxibelelwano nomthengi kuyilo lwegraphic Yinto ebaluleke kakhulu leyo xa usenza naluphi na uhlobo lweprojekthi yemizobo ukusukela kubalulekile ukuba omabini amaqela aqondane kwaye akwazi ukunxibelelana ngokukhawuleza nangempumelelo. Ngethamsanqa kukho izixhobo ezininzi Ukuphucula unxibelelwano kude ngokusebenzisa ubuchwepheshe obutsha, yiyo loo nto lo mzila usiya usasazeka ngakumbi.
Umxhasi akangomyili wegraphic, ayazi ngeenkqubo, imithombo yeendaba, okanye iintlobo zeefayile, yiyo loo nto thina njengeengcali Kuya kufuneka sibonise inyani zeli hlabathi ukuze aqonde ukuba yintoni na Umahluko phakathi kweprojekthi elungileyo kunye nokubi. Fundisa umthengi ngenjongo yokukuthengisela umbono wokuba njengeengcali sizithatha njengezona ziphumelele kakhulu.
Xa siqala iprojekthi ebonakalayo kunye nomthengi sihlala sineengxaki zemiceli mngeni etshintsha ngokuxhomekeke kwiprojekthi nganye entsha, kufuneka sazi ukuba umxhasi akangomyili kwaye ke ngenxa yoko ngokubanzi awazi ukwahlula phakathi kweprojekthi elungileyo kunye neyona ingeyiyo, umsebenzi wethu ikwazise kwaye ikukhokele nakweli nqanaba.
Okokuqala into ekufuneka siyenzile yile misela ijelo lonxibelelwano elichanekileyo Ukuze ubonise izimvo kubaxhasi ngokukhawuleza, sinokwenza oku ngeendlela ezahlukeneyo: Suhlobo, Twilley, Qhuba...njl. Nayiphi na inkxaso umthengi anokuyisebenzisa ukuseka unxibelelwano kwangoko.
Xa sele sinetshaneli yonxibelelwano evulekileyo, lixesha lokuba siqale ukusebenza nomthengi. Nangona umthengi engenguye umyiliUngakubonisa izinto ezilula kunye neziqhelekileyo malunga noyiloUmzekelo, ukuba basi-odile isazisi singakubonisa ifayile ye- Iindidi zemifanekiso yequmrhu ekhoyo ngeenjongo zokukunceda ekuthatheni isigqibo malunga nokuba yintoni oyikhangelayo kumfanekiso wegama lakho. Singakubonisa le tafile incinci ukuze ukwazi ukubona umbono ngokukhawuleza.
Amaxesha amaninzi siza kudibana izilo ezibonwayo oko kuyakusenza ukuba sifune ukukhupha amehlo ethu, ngenxa yesi sizathu kufuneka bonisa umxhasi yonke imifanekiso ebonakalayo ekhoyo ukuze uqaphele ukuba umbono wakho awulunganga.
Kuthekani ukuba umxhasi wam unoluvo olubi kakhulu?
Mamaxesha amaninzi Siza kudibana nabathengi esele benoluvo engqondweni malunga nendlela abafuna uyilo ngayo kodwa licebo elibi kakhulu (ukuxhonywa) kule meko into esinokuyenza sebenzisa inethiwekhi yoluntu Twilley. Kule nethiwekhi yoluntu siya kuba nakho ukufumana zonke iintlobo zezalathiso zeeprojekthi zokwenyani ezisonjululwe ngokuchanekileyo, singasebenzisa esi sixhobo ukwenza umthengi atshintshe ingqondo.
Ukuba iprojekthi yethu yemizobo ayiyondibaniselwano kodwa yiposta, iflaya okanye olunye uhlobo lwefomathi yoyilo, kufuneka buza umthengi uthotho lwemibuzo ngaphambi kokuqala ukusebenza ukuyenza icace into oyifunayo kwasekuqaleni. Le yeminye yemibuzo ekufuneka siyibuze umxhasi:
Yeyiphi eyona nto ibalulekileyo kuyilo lwethu?
Ufuna ntoni? (bonisa izingqinisiso)
Le mibuzo mibini isisiseko xa usebenza nomthengi ogunyazise iprojekthi ebonakalayo kule hlobo kuthi. Okokuqala kufuneka sithethe naye ukuze asicacisele loluphi ulwazi olubaluleke kakhulu kuyilo Kuthi abayili bethu baseke uluhlu oluphezulu lomxholo ngendlela efanelekileyo nesebenzayo. Uhlobo olugqibe ngalo kufuneka luhambelane necandelo leprojekthi kunye nenjongo eziyizalisekisayo, umzekelo, ipowusta yomsitho wabantwana ayifani neposta yesemina yesayensi. Ukuba umxhasi wethu unoluvo olubi kolu hlobo loyilo, into esinokuyenza ndikubonise izingqinisiso kwakhona kwi Twilley ukuze azi iiprojekthi ezenziwe kakuhle kwaye aqonde ukubaluleka koku.
Psingasebenzisa ukunxwala ukukubonisa umbono wethu ngendlela enomtsalane, Umthengi uyakubona oku Olona luvo lusondeleyo kwinto eyakuba yiyo Uyilo lwayo unokuziva utsaleleke ngakumbi kuyo ngokufumana ukuba yamkele isindululo sethu. Kufuneka sihlale sikhombisa umthengi a Isindululo siyinyani ngangokunokwenzeka kwaye sinomtsalane ngokubonakalayoayisiyiyo eyokubonisa ilogo yethu kwimvelaphi emhlophe kuphela kodwa malunga thengisa umbono wethu ngokukubonisa uphawu lwakho kwinkxaso yokwenyani, Kungenxa yoko le nto ukusetyenziswa kwe ukuhlekisa Kubalulekile xa usebenza nabathengi. Unga yenza intetho (ibekwe kakuhle) ibonisa isindululo sakho kumthengi ngendlela emnandi nenomtsalane. Iprojekthi yemizobo ayihlali nje kwiscreen kodwa iya kuba yinkxaso yokwenyani kwaye yile nto kanye umthengi efanele ayibone, sukumbonisa ilogo umbonise uphawu lwakho.
Unokuba nomdla kwezi zithuba:
I-Pinterest: isixhobo phakathi komyili kunye nomxhasi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Unxibelelwano nomthengi kuyilo lwegraphic